समाचार – Online Khabar 24
पुरा खबर, कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका – ३ बडहराका ४२ वर्षीय गोपाल केसी १० दिनअघिसम्म जीम गईरहेका थिए । वर्षौैदेखि जिम गर्दै आएका केसीले को’रोनाको दुई वटै खोप पनि लगाईसकेका थिए । उनी नियमित व्यायामका कारण स्वस्थ देखिन्थे ।एक साता अघि ज्वरो र खो’की लागेपछि उनले मेडिकल पसलबाट औ’षधी ल्याएर खान थाले । जव मेडिकलबाट ल्याएको औ’षधीले काम गरेन । आईतवार साँझ उनी बरिष्ठ फि’जिसियन डा. शुभेषराज कायस्थको क्लिनिकमा पुगे । डा.कायस्थ उनको अवस्था देखेर आत्तिए । र स्वास्थ्यमा किन यति ला’परबाही गरेको भनेर उनी झ’र्किए । डा.कायस्थ भन्छन्, “म कहाँ आउदा केसीको शरीरमा अक्सिजनको लेवल ३५ प्रतिशत थियो र सास तिब्र रुपले बढिरहेको थियो । को’रोनासंगै उनलाई क’डा खालको नि’मोनिया भएको र त्यसले फोक्सोमा असर गरिसकेको देखिन्थ्यो । ए’क्सरे गर्दा फोक्सो ड्यामेज देखियो ।”डा. कायस्थले तत्काल केसीलाई भेन्टिलेटरमा रा...
हेर्नुस भिडियो, काठमाडौं, कात्तिक ९ । एक व्यक्तिले धामी बसी झारफु'क गर्ने क्रममा श्रीमती र छोरीको ह'त्या गरेका छन् । देउमाई नगरपालिका-५ बारुङ का ३३ वर्षीय कमल तामाङले झार'फुक गर्ने क्रममा आफ्नै श्रीमती र छोरीको ह'त्या गरेको प्रदेश–१ प्रहरी कार्यालय विराटनगरले जानकारी दिएको छ । आज बिहान ६ बजे उनले आफ्नै घरभित्र घर परिवारका सदस्य राखी धामी बसी वि'गतदेखि बेला'बखत बेहो'स हुने बिरा'मी रहेका श्रीमती ३४ वर्षीया सीता तामाङ र छोरी १६ वर्षीया शिक्षा तामाङको झार'फुक गर्ने क्रममा घाँ'टी तथा श'रीरको विभिन्न भागमा टो'क्दा उनीहरुको मृ'त्यु भएको हो । घट'नाको जानकारी पाए लगत्तै अस्था'यी प्र'हरी चौकी गजुरमुखीधाम इलामबाट प्र'हरी टोली ख'टिई गई कमल तामाङलाई निय'न्त्रणमा लिएको हो । घट'नाबारेमा थप अनुस'न्धान भइरहेको प्रह'रीले जनाएको छ । श्रीमती र छोरीको ह'त्या गरिसकेपछि उनले आफ्नै बाबुलाई अब तेरो ...